Akuyi kubakho lutshintsho kumgaqo-nkqubo wohlaziyo lwe-Android One | I-Androidsis
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo besithetha nge-Android One kunye nokuvela kwayo kwintengiso, ungafunda ntoni apha. Enye yeenzuzo ezinkulu zolu hlobo lwenkqubo yokusebenza kukuba uGoogle uqinisekisile iminyaka emibini yohlaziyo lwenkqubo. Ngaphandle kwamathandabuzo, inqaku abasebenzisi be-Android abalixabisayo ngokuqinisekileyo, yiyo loo nto bekhetha ifowuni ngale nguqulo yenkqubo yokusebenza.
Kodwa, izolo iindaba zaphule loo Google besisuse icandelo elithetha ngeminyaka emibini yenkxaso ezivela kwiwebhusayithi ye-Android One.Isiqwenga seendaba esiphakamise zonke iialam malunga notshintsho olunokwenzeka kumgaqo-nkqubo wale nguqulo yenkqubo yokusebenza. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi khange kube njalo.
Emva kwengxwabangxwaba enkulu ebangelwe yinethiwekhi, inkampani ngokwayo kuye kwafuneka ijongane namahemuhemu. UGoogle uqinisekisa ukuba akukho lutshintsho kumgaqo-nkqubo wohlaziyo lwe-Android One.Ngoko ke le minyaka mibini yokuhlaziywa kwenkqubo ihlala ifana.
Ngokuqinisekileyo sisiqabu esikhulu kubasebenzisi. Kuba ukuba kukho into ethi uphawu Android One ngumgaqo-nkqubo wokuhlaziya omkhulu, into eyoyisile abasebenzisi be-Android. Ukongeza ekwenziweni kweefowuni kuye kwanda ngokuhamba kwexesha. Iifowuni ezilishumi elinesihlanu ziye zangena ezivenkileni kulo nyaka.
Ukuze abasebenzisi baqiniseke. Akuyi kubakho lutshintsho malunga noku, Ubuncinci okwangoku. Nangona inokuba yinto engaqhelekanga ukuba uGoogle angatshintsha okanye asuse into engathandabuzekiyo yeyona ndawo inamandla ye-Android One.Ingayingxaki enkulu ukuqhubela phambili kwayo kwintengiso.
Ke entsha iimodeli ezifika nge-Android One kwintengiso ngo-2019, baya kugcina le minyaka mibini yohlaziyo. Okwangoku asazi ukuba zeziphi iimodeli eziza kukhutshwa kunye nale nguqulo yenkqubo yokusebenza. Kodwa ngokuqinisekileyo siya kwazi kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Iinguqulelo ze-Android » UGoogle uqinisekisa ukuba akukho lutshintsho kumgaqo-nkqubo wohlaziyo lwe-Android One
IHuawei P Smart 2019: Iphrimiyamu entsha yohlobo lwebhrendi